Ururka OIC oo sheegay iney jabuuti ku taageerayaan helista kursiga Qaramada Midoobay | Radio Banadir
Home Wararka Ururka OIC oo sheegay iney jabuuti ku taageerayaan helista kursiga Qaramada Midoobay
Ururka OIC oo sheegay iney jabuuti ku taageerayaan helista kursiga Qaramada Midoobay
Sabti, RBB News – Ururka waxaa uu Waddamada Islaamka ah ee xubnaha ka ah Ururka kaga codsaday in ay garab istaagaan dowladda Jabuuti oo tartan ugu jirta Kursiga aan joogtada ahayn ee Golaha amaanka.
War saxaafadeed kasoo baxay Ururka OIC ayaa jabuuti loogu balanqaaday is gara istaag xoogan oo ku aadan sidii ay ku heli laheeyd kursiga Qaramada Midoobay.
sidoo kale dhamaan wadamada islaamka ayaa loogu baaqay in ay kamid noqdaan taageerada lagu doonayo in jabuuti ay kenya kaga adkaato kamid noqoshada Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Waddamo ay kamid yihiim kuwa ugu quwada weyn caalamka sida Mareykanka, China, Japan iyo kuwo kale ayaa sidoo kale taageeraya dowladda Jabuuti maaddaama ay saldhig Milatari ku leeyihiin.
jabuuti ayaa loolan xoogan kala kulmeysa dowladda kenya oo tartan ugu jirta sidii ay ku heli laheyd kursiga Golaha Amaanka.
Kenya ayaa waxaa ay dadaal badan ku bixisay sidii ay codka uga heli lahayd waddamada ku dhow,waxaana Madaxweynaha Kenya uu booqasho ku tagay Waddamo badan oo uu isleeyahay waxaad ka heli kartaa codka kalsoonida.
Danjiraha Dowladda Jabuuti ee Qaramada Midoobey Maxamed Siciid Ducaale ayaa sheegay in kursigaasi uu dhexyaallo codka 193 dal oo ku jira Qaramada Midoobey Dowladda Jabuutina halkaas ka tartami doonto.
Midowga Afrika ayaa 21kii Bishan August Kenya ugu codeeyay in ay kursigaas ku matasho Qaaradda Afrika laakiin Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in aanay ka tanaasulin kursigaasi islamarkaana Golaha amaanka ugu tartami doonto.
Labada dal ayaa kursigan ku tartami doona bisha September ee soo socota marka uu furmo shirweynaha golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Previous articlemaxaa ka cusub Jubbaland
Next articleCanada oo joojisay dib u celinta muwaadin soomaaliyeed